Welcome to Aayaha Nolosha » SODDOH ABAAL MARISAY MID KA MID AH GABDHAHA WIILASHEEDU QABAAN… !
SODDOH ABAAL MARISAY MID KA MID AH GABDHAHA WIILASHEEDU QABAAN… !
March 24, 2019 - Waxaa Qorey : Caaqil Dalmar -
Saddex Wiil oo walaalo ah ayaa waxa ay guursadeen saddex gabdhood oo mid waliba uu isagu si gaar ah u doortay, waxayna degeen hal magaalo balse kala xaafado ayay ahaayeen.
Hooyada dhashay wiilasha oo ganacsato ahayd ayaa mar ay shaqadii ganacsiga ka fadhiisatay oo ay gabowday waxay soo xaraashtay dhammaan hantideeda, lacagaheediina faraqa ku soo shubatay.
Mar haddii ay shaqadii tahli weysay oo ay ka duqowday, hantideediina soo xaraashatay ayaa waxay ku fakartay in ay doorato mid ka mid ah wiilasheeda si ay ula noolaato, waxayna go’aansatay in gabdhaha ay wiilasheedu qabaan mid mid u imtixaanto si ay u kala ogaato midda ay isku aamini karto ee xanaanayn karta inta nolosheeda ka dhiman iyo midda aan mudneyn inay la noolaato.
Wiilkeedii curadka ahaa ayay ugu horreyn gurigiisa ku hor martay oo u martisay, markii la soo dhaweeyay ayay u sheegtay in caawa ay la seexanayso, waana laga ogolaaday oo qolka martidaa loo goglay.
Markii waagu dilaacay ayay gabadhii uu wiilkeeda qabay ka codsatay biyo ay ku weyso qaadato si salaadda subax ay u tukato, waxayna u keentay biyihii, markii ay weyso qaadatay ayaa intii biyaha ka soo hartay gogasha ku daadisay.
Gabadhii oo Shaah hordhac ah u keentay ayay u sheegtay in xalay ay gogosha ku kaadisay, markiiba afkeeda uu ka sii dhammaanayay Joodaragii ayaan ku kaadiyay qeylo ayay afka furatay oo duqdii u dhaadhaamisay.
Wiilkeeda oo qeylada ku soo toosay ayaa qolkii soo galay, wuxuuna si aan wanaagsanayn ula hadlay Hooyadiis oo uu ku yiri “Hooyo sidee wax kaa noqdeen qof weyn ayaad tahaye” gabadhii xaaskiisa ahayd oo sii qeylinaysa ayaa hooyadii ku amartay in ay gogosha -dhaqdo, Hooyadiina wey yeeshay oo Joodaragii ayay dhaqday, wayna ka soo tagtay.
Hooyadii waxay timid gurigii wiilkeedii labaad uu xaaska ku qabay, sidoo kale ayaa qacdii hore loogu soo dhaweeyay, waxayna u sheegtay in caawa ay la hoyanayso, waana laga ogolaaday oo qol ayaa loo goglay.
Markii waagu dilaacayay ayay sidii si la mid ah biyo weyso ka dalbatay gabadhii uu wiilkeedii Labaad qabay, markii ay u keentayna sidiyoo kale ayay samaysay oo gogoshii ku daadisay.
Shaahii aroornimo markii ay u keentay ayay u sheegtay in ay xalay gogosha ay Kaadi kaga baxsatay, kolkaasay iyana qeylo u gashay, wiilkeedii oo ku soo toosay indhaha ayuu ka daawaday xaaskiisa hooyadii ku qeylinaysa, Hooyadiina waxay tiri “Gabadheydiyey ha igu qeylin anigaa gogosha dhaqayee”, sidii ayayna gogoshii u dhaqday.
Gurigii uu wiilkeedii yaraanka ahaa gabadha ku qabay ayay tagtay, markii la soo dhaweeyay ayay u sheegtay inay caawa la hoyanayso, waana laga yeelay oo qol loo goglay.
Sidiyoo kale ayay iyana yeeshay oo biyo weyso dalbatay, markii loo keenay ayaa intii weysada ka hartay gogoshii ku shubtay, markii la gaaray aroornimadii oo shaahii loo keenay ayay gabadhii u sheegtay in xalay Kaadi kaga baxsatay gogosha, gabadhii ma aysan ku qeylin sidii labadii gabdhood ee wiilasheedii waaweynaa ay qabeen oo kale, waxayna si naxariis leh ugu tiri “Hooyo, qofka haddii uu gaboobo, mararka qaar kaadidada ma ceshan karo oo wey ka baxsataa, anagaba markaanu yareyn gogosha waan ku kaadin jirnay, iskaba daaye korkiina ayaan ku kaadin jirnay oo Hooyo wey inoo soo dul qaadatay” wiilkeedii ayaa sidoo kale ku soo baxay sheekadoodii oo inta dhunkaday yiri “Hooyo, Alle haku xafido” inta uu Joodaragii soo qaaday ayay isaga iyo gabadhii uu qabay wada dhaqeen, kadibna quraac heer sare ah u diyaariyeen Hooyadii, markii ay quraacatay ayay gabadhii u yeertay oo ku tiri “Hooyo gabar aanu deris nahay ayaa Lacag ii soo dhiibatay oo igu tiri Jijimo dahab ah ii soo iibi, gabadhaasna adiga ayaad isku gacan tihiin, marka waxaan rabaa inaan gacantaada khiyaas ka qaato si aan gabadhaas dahabka ay ii dirsatay aan ugu soo gado”.
Gacantii gabadha ayay Hooyadii cabir ka qaadatay oo suuqa aadday, waxayna soo iibisay dhow jijin oo dahab ah, dhego dhego, qoor gashi, waxayna intaas ku qarash garaysay lacag dhowr Kun oo doollar ah.
Hooyadii oo ujeeddo ka lahayd arrintaas ayaa isugu yeertay wiilasheedii iyo gabdhihii ay qabeen, waxayna u samaysay casuumaad gaar ah.
Waxay uga sheekeysay wixii dhacay saddexdii maalmood ee ay martida u kala ahayd, hadalkeediina waxay ku bilowday, “la joogistiina iyo waqtigii aan idinla qaatay, waxaan ka lahaa ujeeddo, gabar waliba waxaan ku iri biyo weyso ii keen, markii aan biyaha ku weyso qaatay ayaa intii soo hartay gogosha ku daadiyey, waxaana mid waliba u sheegay in aan ku kaadiyay gogosha, balse Kaadi ma ahayne biyahaas ayay ahaayeen, imtixaan iyo inaan wax ku kala ogaado ayaan ka watay.
Gabadha koowaad ee wiilkeyga weyn uu qabo si ba’an ayay ii canaanatay, wiilkeyga weyna wuu la saftay oo isna si aan wanaagsanayn ayuu iila hadlay, waxayna gabadha igu amartay in aan Joodaraga dhaqo, waana dhaqay.
Gabadhii labaad iyana sidoo kale way i canaanatay, wiilkeygii qabayna lama uusan hadlin oo indhahuu inaga daawaday, sidoo kale ayayna gabadhii igu qasabtay inaan joodariga dhaqo, waana dhaqay.
Gabadha wiilkeyga yaraanka ah uu qabo iyadu si naxariis leh ayay iila hadashay, wiilkeygana si la mid ah, Joodaragana isaga ayaa bixiyay, gabadhana way dhaqday, weliba waxay igu tiri “Anagaba waan idinku soo kaadin jirnay oo inoo soo dulqaadan jirteene dhib malaha”.
Hooyadii inta Boorsadeedii soo haabatay ayay dahabkii ka soo saartay waxayna guddoonsiisay gabadha yaraankedu uu qabay oo ay sheegtay in ay ku guulaysatay imtixaankii ay saddexda gabdhood iyo saddexdeedii wiil ka qaadday, waxayna dahabkii oo culeyskiisa la qaadi karin ay u xirtay gabadhii oo ay sheegtay inay iyada la noolaanayso, hantideedana ay iyada ku wareejisay.
Gabdhihii kale wey ka shalaayeen waxa ay sameeyeen, balse shalaayti maxay u tartaa, xaalka ayaa ku xumaadaye.